ezitebhisini Classic ezenziwe ngemabula bese egwadle muhle futhi kuyabiza. Kwaphela isikhathi eside, bagcizelela isimo sezenhlalo umnikazi endlini. ukufakwa kwabo izakhiwo zikahulumeni, iminyuziyamu, izigodi patrimonial nezigodlo zasebukhosini. Ngemva kokufunda lesi sihloko, uzofunda mayelana nezici eziyinhloko nezinzuzo izakhiwo ezinjalo.
I izakhiwo eyinhloko bawo nezinto ezasetshenziswa ukwenziwa mikhiqizo
Izitebhisi ezenziwe ngemabula iyona engcono ukuhanjwa izindlu zangasese. Ingenye inhlanganisela yimpumelelo kakhulu sobuhle bayo futhi omuhle kakhulu izici lobuchwepheshe. Ukuze womshini izakhiwo ezinjalo usebenzisa izinto zemvelo, esibonakala by ukuqina okusezingeni eliphezulu usizo.
Izinzuzo main zemabula akunakubangelwa ukusebenza hhayi kuphela kakhulu zokuhlobisa, kodwa futhi omuhle kakhulu izinga nemingcele. Kuthathwa i material imvelo, njengoba ngokuphepha ngangokunokwenzeka impilo yomuntu. Isakhiwo esakhiwe kuyo abonise ukumelana ngcono ukuba imiphumela emibi iziphi izici zangaphandle. Bona kalula ukumelana eziningi isisindo, uthuthumele nomunye umonakalo lokukhanda. Isikhathi ekusebenzeni iminyaka engaphezu kweshumi, futhi naphezu kweqiniso lokuthi zidinga ukunakekelwa okukhethekile.
Ububi imiklamo ezinjalo akunakubangelwa izindleko kuqhathaniswa eliphezulu. Namuhla ezitebhisini ezenziwe ngemabula, intengo zazo luyehluka in the ububanzi 4000-15000 ruble nangaphezulu kubhekwa ngempela eqolo, zingakwazi ukufunda iningi lezakhamuzi isilinganiso.
I izici ezibaluleke kakhulu ngezitebhisi ezenziwe ngemabula
kokuma isikhathi eside esisebenzayo luye lwabonisa ukuthi phansi isakhiwo esinjalo angaphansi kakhulu ukugqoka. Ngakho-ke, ochwepheshe batusa ukuthenga imikhiqizo izinyathelo esikhiphekayo. Kulokhu, ungakwazi uzihlele kabusha ngezikhathi ukugqoka kwaba iyunifomu ngaphezulu. Izitebhisi ezenziwe ngemabula kabi sisusiwe iminonjana iodine, Uyinki nefolishi oluhlaza. Ngakho-ke, kumelwe siqinisekise ukuthi lezi izinto kungukuthi elichithwe ke.
Kubalulekile ukuqonda ukuthi itshe esetshenziswa behlise balusters, ayifanele izinyathelo ukukhiqizwa njalo. Ngaphandle zemabula kubhekwe impahla kuqhathaniswa esithambile nge elithe ongaphakeme ngomshikisho ukumelana indices, isithwathwa ukumelana kanye ubulukhuni.
Emvelweni, kukhona abandayo zemabula anemibala efudumele. Ngakho-ke, ngesikhathi kumiswa yimpandla amapuleti kumele kusetshenziswe, efaneleka kakhulu umbala wesikimu egumbini.
Ukubeka kwasusa izitebhisi zemabula, kubalulekile ukukhetha umthunzi kwesokudla Ukwakheka ingcina. Professionals Sisikisela ukuthatha omhlophe, njengoba ngeke ubonakale ngokusebenzisa ukushuba we yimpandla. Kuyinto efiselekayo makudle esifushane oyibamba glue, awunaso isikhathi cwilisa ku ezimbotsheni into.
Ukuze okukhulu ukuphepha design ubuso bayo kufanele welashwe ngumsebenzi ukwakhiwa ekhethekile ezifana ngengcina yezinyosi noma bakhulelisa itshe yemvelo. Labo short imali, kodwa amaphupho ezitebhisini zemabula, kungase kube ukuhlakanipha ukuba oda esehlanganise amapuleti ukuthi ukuhlobisa esiteji. Bona izobiza ishibhile kuka izakhiwo eziqinile.
Kuze kube manje, kokuqeda izitebhisi zemabula kwenziwe ngezindlela ezahlukene. isigaba yanamuhla zingahlukaniswa izigaba ezintathu:
imikhiqizo Factory. Ezinye izinkampani obandakanyekile ekukhiqizeni izakhi ngomumo ejwayelekile kokuba zosayizi ojwayelekile. izinyathelo ezifanayo ezinamanani aphansi iphansana, kusukela ngemva womshini yabo cishe akukho imfucuza.
Slabs kukhona okukhulu eluhlaza ematsheni. ukujiya yabo ubuncane 4 ngamasentimitha. Zisetshenziswa okwenza ezihlukahlukene imikhiqizo.
isigaba Usisiza Lifanele for izindlu zikanokusho, phansi okuyinto okuqoqiwe izinhlobo ezehlukene itshe yemvelo.
Izitebhisi ezenziwe ngemabula: Ukunakekelwa Isondlo
Imikhiqizo ezenziwe okuhlala isikhathi eside itshe yemvelo okuhlala ikakhulukazi. Basuke izimpawu ukusebenza kakhulu. Nokho, abanikazi izakhiwo ezinjalo kumelwe singakhohlwa ukuthi lokhu okubalulekile kungenzeka amabala kusuka ekuchitheni ngephutha.
Izitebhisi ezenziwe ngemabula akuyona ukungenwa okungazelelwe lokushisa izinguquko, ngakho-ke ingafakwa emnyango main. Frost akuphazamisi ubuqotho isakhiwo, futhi yelanga ngeke zibangela ushintsho esimweni amazinga komthunzi.
Ngaphandle, isitebhisi ahlukile ayidingi ukunakekelwa eziyinkimbinkimbi. Marble kubhekwa omunye impahla esiwusizo kakhulu. Ukuze alondoloze ubumsulwa izinyathelo badinga ukuba ngezikhathi bahlanza ngendwangu emanzi. Ukubuyisela ayebuthaka yabo acwebile futhi zikhanyise, uvuselele nabo ngokwanele ngokusebenzisa kabusha ezipholisha.
Marble ezitebhisini kubhekwe njengento elibalulekile wezangaphakathi. It ikuvumela ukuba ichaze leli qiniso eliyisisekelo processing izindawo. isigaba Ziyamangalisa zamatshe wemvelo Sekuyisikhathi eside ukhangwa abantu abacebile abafuna ukugcizelela bengabakaJehova kwezakhi ephakeme emphakathini. Namuhla, ngale miklamo omkhulukazi grand ayatholakala ningi mansions suburban. Into kuphela akufanele sikhohlwe lapho iyala zemabula ezitebhisini, wukuthi ukudalwa imikhiqizo enjalo kufanele bakwenze uchwepheshe ofanelekayo. Kuphela professional weqiniso lungacacisa isiqondiso kwesokudla impahla ukusika, okuvumela ukuba embule amandla ayo yobuhle.
Izakhiwo prefabricated eyenziwe isangweji panel: ukukhweza ubuchwepheshe
Sealant Izinkuni: izinhlobo kanye nemithetho kwesicelo.
Self-yokululama phansi: ukubuyekeza kanye Izinzuzo
Iminikelo evela "Thumela Bank" - ukhululekile, ephephile futhi inzuzo
Uqweqwe umbala usana: yini noma cha sokukhathazeka nendlela ukukususa?